Sida loo guuleysto Amazon oo raadinaysa raadinta keywords keywords ugu fiican?
Nasiib darro, ma jirto hage dhammaystiran ama qorshe hawleed oo tallaabo tallaabo ah oo damaanad qaadi kara liisaskaaga sheyga ayaa si fiican loogu arki doonaa raadinta Amazon iibsadaha iibiyaha sare. Iyadoo malaayiin ka mid ah dukaamada, firfircoonida alaabooyinka, iyo sarreynta rikoodhka raadinta algorithm Amazon waa meel aad u tartan oo lagu iibiyo. Oo halkan waa marka aad soo bandhigto alaab-celintaada ku soo gashay ciyaarta. Waxaan loola jeedaa in liiska wanaagsan ee ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan ee aad si fudud u fuuli kartaa sare ee Amazon raadinta iibiyaha iibiyaha u habboon - ventilatori alta efficienza. Laakiin sida loo helo ereyada ugu muhiimsan ee leh raadinta ugu weyn ee tartanka weli weli tartanka hoose? Hoosta waxaan ku socdaa inaan kuu muujiyo waxbarid gaaban si ay wax waliba u fududaato, ugu yaraan kuwa la xiriira cilmi-baarista muhiimka ah ee Amazon.
Ka raadso ereyada abuurka
Haddii aadan garanayn astaamaha muhiimka ah ee muhiimka ah si aad u isticmaashid liiska alaabta ee Amazon, halkan waa meesha aad ka bilaabi lahayd. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waxaa la helayaa ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Waxaan ula jeedaa marka aad horey u haysato badeecada iibka, waa wakhti lagu aqoonsanayo qiimaha aasaasiga ah ee raadinta, marka la eego sawir weyn oo loogu talagalay erey-raadinta dheeraadka ah ee ay isticmaalaan dukaamanka nool. Waxaan kugula talineynaa isticmaalka Qorshaha Keyword-ga ee Google sida xalka kickstart aad ku habboon tahay inaad si deg deg ah u fahamto sharciyada ciyaarta aad rabto inaad ku guuleysato raadinta Amazon iibsadaha iibiyaha sare.
Wadajir u Fikrado Fikrado Wanaagsan
Tallaabadaada xigta waa inaad wadatid fikrado muhiim ah oo laga helo labo ilo oo muhiim ah - doorbidista rukunka dhabta ah, iyo sidoo kale keywords keywords ah tartamayaashaada. Halkan waa marka cilmi-baarista ereyga Amazon iyo qalabyada raadraaca ay yimaadaan ciyaar! Nasiib wanaag, waxaa jira fursado badan oo kala duwan (iwm, qalabka gaarka ah, goobaha internetka, ama fidinta browser) oo laga heli karo Webka. Aniga ahaan, waxaan ku talin lahaa in aan sii wadno cilmi baarista tartanka, iyada oo lala socdo falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan doorbidka rasmiga ah ee la isticmaalayo iyada oo la adeegsanayo mid ka mid ah qalabka soo socda oo loogu talagalay in lagu qiimeeyo raadinta Amazon ee fursadaha muhiimka ah ee iibiyaha ugu sarreeya: KeywordInspector, Scope, JungleScout, ama dufan buuxa AMZ Qalabka tracker.
Falanqee Metrics muhiim ah - oo aad tahay
Ma yaabsan tahay in aad adigu sameysid kumanaanka fikrado kale oo muhiim ah oo u muuqda guuleysta. Laakiin sida loo sheego runtii saxda ah ee ku haboon ee ka timid qaar ka mid ah xaqiiqooyinka aan macquul ahayn? Halkaan waxaa ku qoran mawaadiicda muhiimka ah ee aad ku qorto liiska muhiimka ah ee fikradaha muhiimka ah ee aad ku qortey tallaabooyin gaaban oo ficil ah:
Mugga Qaybta - ku dhaji fudud, waa wax walba oo adduunka ah. Waxaan ula jeedaa in laga reebo suuqyada Amazon laftiisa, mugga raadinta guud wuxuu na siinayaa faham balaadhan oo ku saabsan caannaanta muhiimka ah ee raadinta Google ee ka dhexjeeda dukaamada.
Clicks - ayaa kaa caawin doona inaad fahamto suurtagalnimada taraafikada dhabta ah ee hal eray oo muhiim ah. Ama waliba, idinkoo ogaanaya qiimaha riixa ama gaadiidka kuugu dhow ee tartankaaga ama qaybaha tartanka, waxaad si sahlan u qabsan kartaa qaar ka mid ah ereyada qiimaha leh ee horeyba u muujiyay natiijooyinka ugu sarreeya ee Amazon.
Kala hadal Erayada - tixgeli dhererka iyo darajada dhibcaha erey kasta oo muhiim ah ama weedho dheer oo qeexan ka hor inta aanad hannaankaaga wax-soo-saarku ku habboonayn. Taas macnaheedu waxa weeye waxa ugu dhib yar ee halkan ka jira waa in la helo dheelitirnaan muhiim ah oo caafimaad leh oo u dhexeeya qiimaha ganacsi iyo darajada dhibka. Xusuusnow, waxaad dooneysaa inaad raadiso ereyada muhiimka ah kuwaas oo ay u badan tahay in ay isticmaalaan dadka dhabta ah, ma aha makiinadaha raadinta.